Imaski yamehlo, Isikhafu, iNtloko yesingqino-Impahla emangalisayo
Umenzi wobungcali onamava angaphezu kwama-20 eminyaka
Imveliso eNcomekayo kunye neNkampani yezoRhwebo
Inkampani eyolukiweyo engummangaliso iyimveliso yoyilo lwesilika kunye nomenzi okwiShao Xing China, iimveliso zethu eziphambili yimeko yomqamelo wesilika, ibhonethi yeenwele, iqhiya, imaski yamehlo, isikhafu, kunye nezinye iimveliso. Njengomyili weminyaka elishumi kunye nomvelisi, sinamava aphezulu ekunikezeleni ngenkonzo ye-ODM ye-ODM kubathengi abavela kwiiShishini zokuPhawula kubathengisi be-e-commerce abanjengoAmazon, Ali-Express, Alibaba.
Umenzi wobungcali Ngaphezulu kwama-20Yers ...
2020 / Okthobha
Emva kokunxiba isilika iminyaka emininzi, uyayiqonda nyani isilika? Ngalo lonke ixesha uthenga iimpahla okanye iimpahla zasekhaya, umthengisi uya kukuxelela ukuba le yintsimbi yesilika, kodwa kutheni le nto ililaphu elinobunewunewu ngexabiso elahlukileyo? Nguwuphi umahluko phakathi kwesilika kunye nesilika? Ingxaki encinci: injani i ...
Ukunxiba nokulala kwisilika kunezibonelelo ezimbalwa ezongezelelekileyo eziluncedo emzimbeni nasempilweni yolusu lwakho. Uninzi lwezi zibonelelo luvela kwinto yokuba isilika yintambo yesilwanyana yendalo kwaye ke iqulethe iiamino acid eziyimfuneko emzimbeni womntu ngeenjongo ezahlukeneyo njengokulungiswa kwesikhumba kunye ne-h ...